12 Zvinoshamisa Nzvimbo dzekushanyira MuRussia | Save A Train
musha > Chitima Kufamba Russia > 12 Zvinoshamisa Nzvimbo dzekushanyira MuRussia
Mhiri kweSiberia taiga, dziva rekare kwazvo reBaikal, wild Kamchatka kuMoscow, izvi 12 nzvimbo dzinoshamisa dzekushanyira muRussia dzinotora mweya wako. Ingosarudza nzira yako yekufamba, rongedza magirovhosi anodziya kana raincoat yemamiriro ekunze anonetsa, uye titevere kuRussia.
1. Makomo eAltai
Pakati peRussia, Mongoriya, China, uye Kazakhstan Altai nharaunda iri kumusha kune 700 munyanza, masango, uye yepamusoro soro yeSiberia yeMt Belushka, pa 4506 M. Altai haina vanhu vakawanda, saka uchaiwana isina kubatwa nebudiriro yazvino, uye chete mhuka yemusango nemhuka dzesango zvinokukwazisa.
Pamusoro pe, kana iwe uri mufambi anofarira, ipapo rwendo kune chero yeiyo 1499 glaciers muAltai achakushamisa iwe. Uyezve, rafting mune yakakura Katun uye iyo Biya nzizi chiitiko chinoshamisa. Pane rimwe divi, safari yemusango inogona kunge iri nzira yekuzorora. Unogona kuwana mukana usingawanzoitika wekusangana nembada yechando, ibex, lynx, uye kupfuura 300 marudzi eshiri. Hapana fungidziro, Altai ndeimwe yeakanakisa nzvimbo dzemusango muEurope uye inoshamisa nzvimbo yekushanyira muRussia.
Kazan idenga rekuvaka muTatarstan Republic, kumadokero kweRussia. Pakati peTatar nyika iri pamahombekombe eVolga, uye nzizi dzeKazanka, uye yaifunga seguta rechishanu pakukura muRussia.
Sezvambotaurwa pamusoro, kuvakwa kwenzvimbo huru dzeKazan kunobata kuona kwako nemavara ayo machena uye ebhuruu uye dhizaini. Semuyenzaniso, Kazan Kremlin, nzvimbo yenhaka yepasi rose, Kul Sharif Mosque, Epiphany Cathedral, ingori mashoma enzvimbo dzaungashanyira kuti udzidze zvakawanda nezvetsika dzechiTatar.
3. Zvinoshamisa Nzvimbo dzekushanyira MuRussia: Lake Baikal
Iri dziva rekare kwazvo munhoroondo yenyika, Lake Baikal aumba 25 miriyoni makore apfuura. Nzvimbo yayo ine chando uye yakakura inoita kuti Nyanza Baikal inokwezva munguva yechando muSiberia, uye muzhizha, unogona kusvetukira mukati memvura yakajeka muEurope, kana kuongorora mhuka dzesango dzisina kujairika munyika.
Kutyaira, kuyemura kubva kuBaikal nzira netsoka, kana kuve nebarbecue pamhenderekedzo yegungwa rinoshamisa kwazvo muRussia, iwe uchave neruzivo rwekufunga. Iyo miti yemipaini yakatenderedza, Taiga nerenje vari a chitima rwendo kubva kuguta riri padyo Irkutsk, imwe nzvimbo inonakidza yekushanyira muRussia. Pamusoro pazvo zvese, unogona kutanga yako Baikal ushingi kubva kuChina kana Russia, kuburikidza neTrans-Siberian chitima, chirimo kana chando.
Guta reTsars uye dzimba dzemamambo dzinozivikanwa, Saint Petersburg yakafuridzira vadetembi nevanyori. Kana usati waenda kuSaint Petersburg, hauna kunyatsoona Russia, nekuti iri guta nderimwe remifananidzo yeRussia inozivikanwa uye inoyevedza.
Iyo Hermitage, Catherine Palace, Muzinda weZima, uye Peterhof minda, zvinongo fema. Nhanho yega yega yaunoita inokuswededza padhuze ne Russian fairytale uye inokunakisa. Nhoroondo yeSaint-Petersburg uye zvivakwa zvinoita kuti ive nzvimbo inofanirwa kushanyira muRussia uyezve imwe yepamusoro 12 nzvimbo dzinoshamisa kwazvo muRussia.
Wemusango, yakakura, runako, uye zvinoshamisa, Kamchatka yakakumirira iwe panenge kumagumo epasi. Iyo Kamchatka peninsula iri kumabvazuva kure kweRussia, kumba kunenge 300 volcanos, mazhinji ari kushingaira, uye maonero anonyanya kufadza ePacific Ocean uye murenje reRussia. Vashoma kwazvo vanoziva zvishamiso zveKamchatka, saka Kamchatka ndiyo nzvimbo inoshamisa uye inoshamisa kushanyira muRussia.
Iwe uchaona kuti hazvisi nyore kudaro kusvika kune zvinoshamisa zveKamchatka, nekuda kwenzvimbo yayo iri kure. zvisinei, paunozviita, iwe unozotorwa kushamisika nehunhu hwepakutanga, zvishamiso zvepanyama: ari zvitubu zvemvura inopisa, nzizi, mhuka dzesango, uye zvechokwadi makomo. A rwendo rwegomo ndechimwe chezvinhu zvakanyanyisa uye zvinonakidza kuita muKamchatka. Semuyenzaniso, Klyuchevskaya Sopka ndiyo yepamusoro soro uye gomo rinoputika, kwaunoda kuenda kune vafambi vazhinji muKamchatka.
6. Zvinoshamisa Nzvimbo dzekushanyira MuRussia: Sochi
Pamuganhu weGungwa Dema, yakakomberedzwa nemakomo akasvibira uye nzvimbo dzekutandarira, Sochi ndiyo yekupedzisira zororo zororo kuenda kuRussia. Sochi yakakurumbira zvekuti guta rinokwezva 4 vanhu vane miriyoni gore rega rega, yavo zororo rezhizha pedyo negungwa.
Pamusoro pekushambidza nezuva, Iyo Sochi Arboretum, kana Italy diki, yakakwana kune panoramic maonero eGungwa Dema uye Sochi, uye kutenderera mumagadheni vachiyeva mapikoko.
Kupedza, hapana imwe nzvimbo iri nani yezororo rekuzorora, mumutauro weRussia, Russia kupfuura muSochi. saka, hazvishamise kuti iwe waigona kuenda kuSochi kubva kuMoscow uye chero nzvimbo muRussia, pamwe nekubva kuCentral Asia uye Eastern Europe, nechitima.
Veliky Novgorod ane nzvimbo yekukudzwa pane yedu 12 nzvimbo dzinoshamisa kwazvo dzekushanyira muRussia. Iwe unogona kutaura kuti iyo huru Novogrod ndipo pakauya Russia nyika huru yazviri nhasi. Kudzoka muna9 zana remakore, Veliky Novogrod ndokwaive uko Prince Rurik, mu 862 yakazivisa nyika yazvino yeRussia uye yakaita Novogrod nzvimbo yepakati yekutengeserana, democracy, uye kuverenga pakati peRussia neBalkan.
saka, kana iwe uri munhoroondo yeRussia, Veliky Novogrod inofanira kunge iri pane yako bhaketi rondedzero. Iyo Novogrod Kremlin nhare, Cathedral St.. Sophia vakarurama 2 yeayo anofanirwa-kuona masaiti muVeliky Novogrod ayo anokushamisa iwe. Kumirira 800 makore, chimbofunga nezvenyaya uye zviitiko zvakaitika pano.
8. Zvinoshamisa Nzvimbo dzekushanyira MuRussia: Olkhon Island
Lake Baikal rakakura kwazvo, kuti taifanirwa kuwedzera imwe nzvimbo inoshamisa inofanirwa kushanyirwa muRussia. Olkhon Island ndicho chitsuwa chikuru muLake Baikal, saizi yakafanana neNew York City. Chitsuwa ichi musha wekufunga masango, nzvimbo ine matombo, uye chete 150000 vagari, kusiyana neNew York City.
zvisinei, Olkhon Island inzvimbo inozivikanwa yevafambi kuenda kuLake Baikal. Izvi zvinoreva kuti muzhizha iwe unogona kuuya kuzoshambira mune yakajeka pristine yegungwa mvura uye kunyura mune rakadzika kwazvo nyanza pasi. Munguva yechando, pane rimwe divi, unogona kuuya kuzoyemura dziva rekare pasirese, mumupfekero wayo wechando, chando uye akanaka chena.
Chitsuwa ichi chikepe chiri kure neSakhuyurta uye nevanhu veBuryat vanofungidzirwa kuva 1 yematanda mashanu epasi rese eShamanic simba. Saizvozvo, unogona kuwana shaman matombo ari pakati pechitsuwa.
Kana iwe uri parwendo rwako rweTrans-Siberian, ipapo ungangomira muIrkutsk, iro risingazivikanwe guta guru reEastern Siberia. 19machechi ezana ramakore rezana ramakore reRussia, matanda mashava uye ebhuruu dzimba dzakatsvuka, Siberian Taiga, Irkutsk - yakanaka nhoroondo guta.
Uyezve, Irkutsk yaimbova nzvimbo yekutapwa kwevakuru vazhinji veRussia uye vakadzidza muSiberia, kana hurumende yaitonga yakafunga kuti vakapesana nesimba. saka, Irkutsk uye Siberian taiga inoratidzira akawanda mabasa eRussia enhetembo uye mabhuku. Kunyange zvakadaro, nhasi Irkutsk iguta rakanaka: bhuroka 13 dzedzimba dzematanda ezana ramakore rechi18, Chechi yeMuponesi, uye iyo Bronshteyn Garari ndedzimwe dzenzvimbo dzaunofanirwa kushanyira.
10. Zvinoshamisa Nzvimbo dzekushanyira MuRussia: Stolby Nature Reserve
Pamahombekombe eRwizi rweYenisei, Stolby yemhando yekuchengetedza iri kumaodzanyemba kweguta reKrasnoyarsk. Iyo yekuchengetedza haina kuwira murunako kubva ku pamusoro 5 akanyanya kunaka masosi ekuchengetedza muEurope. Mushure merwendo rurefu kuchitima cheTrans-Siberia kuyambuka Russia, iwe uchaona kuti kutenderera uchitenderera kunosimudza mweya yako unomutsa wakarara muviri nemweya.
Stolby ane 5 main mavara-makodhi nzira, saka haungarasike munzira dzakawanda diki dzesango. Ukangosvika pakadzika musango, iwe uchaona zita rekuchengetera mavambo. Pane 100 stolby - mbiru dzematombo, masumbu anoyevedza uye akareba emastolby pakati pemiti.
Kushanyira iyi yakanaka paki yakasarudzika ndeye zvekunakidzwa neakanakisa amai hunhu. Hapana chakafanana nekunhuhwirira uye maonero emasango eRussia, muzhizha kana muchando. zvisinei, kana iwe uri kuronga rwendo rwechando chiyeuchidzo nekukurumidza chekupfeka matete mazhinji, sezvo Siberia inotonhora zvakanyanya uye inotonhora.
Rakajeka Arbat, Kremlin uye Red Square, St. Basil's Cathedral, neMoskva rwizi, chimiro mune yega postcard, mufananidzo, uye chidimbu nezveMoscow. zvisinei, chete kusvikira iwe watsika tsoka munzvimbo dzino dzinoshamisa, kuti unonyatsokoshesa ukuru uye runako rwavo. Hapana mubvunzo pamusoro pekunaka kwakanaka kweMoscow. saka, hazvishamise kuti guta guru nderimwe re 12 nzvimbo dzinoshamisa kwazvo dzekushanyira muRussia.
Ipo Moscow iri kufema, guta repasi pevhu rezviteshi zvemetro rakaenzana zvakaenzana. Guta kufamba kwekufamba munzvimbo yepasi peMoscow ndechimwe chezvinhu zvakanakisa zvekuita muMoscow. pano, iwe unowana matani einfo nezve hunyanzvi, patani, uye nhoroondo yechiteshi chese, pamwe chete neguta, kubva munharaunda.
12. Zvinoshamisa Nzvimbo dzekushanyira MuRussia: Kizhi Island
Machechi ematanda, octagonal wachi shongwe zvachose yehuni, vanoumba yakasarudzika Kizhi Pogost. Uku kunoshamisa kwekuvakwa kwematanda kwakagadzirwa nevavezi, pane chimwe chezvitsuwa muLake Onega. Iwe unozoshamiswa kuziva kuti iyi mhando yemhando yaive yakakurumbira munguva dzekare. Idzi nzvimbo dzematanda dzaive dzakakurumbira nzvimbo dzeparishi muzana ramakore rechi16, uye pamwe pakutanga.
Nepo machechi asiri mashoma kuona muRussia, machechi emapuranga ari. Chitsuwa cheKizhi muenzaniso wakanaka wevashandi veRussia. Kizhi Island iri UNESCO nhaka nyika nzvimbo, uye chimwe chezvishamiso zvepasi rose, seyakaomesesa rese, inokodzera zvine mutsindo munzvimbo yepanyama.
pano pa Save A Train, tichave tichifara kukubatsira kuronga rwendo rusingakanganwiki kune aya 12 nzvimbo dzinoshamisa muRussia nechitima.
Unoda here kupinza yedu blog positi " 12 Zvinoshamisa Nzvimbo dzekushanyira MuRussia ”kupinda yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fsn%2Famazing-places-visit-russia%2F - (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
#Rashiya	Zvinoshamisa Russia	chechi	GungwaBaikalrussia	Moscow	Mostbeautifulplacesinrussia	SaintPetersburg	Siberia	TranSiberiantrain	Kufamba Russia	Shanyira Russia